Malvasia Nera Zolla 2018 - Wevino.store
Malvasia Nera Zolla 2018
Inowanikwa munhoroondo uye yakaorera nharaunda yePuglia muItari, iyo Vigneti Del Salento ndiyo Winery inova yeFarnese Vini Group. Mazambiringa anodyarwa mune yakasarudzwa mijenya muminda yemizambiringa yePuglia. Boka iri rakasainirana chibvumirano nevari kurima maini edunhu rino, nekuda kwaro, rine mukana wakakwana wekukura, kuchengetedza nekukohwa michero kubva pamijenya yakasarudzwa yakagoverwa pano.
Kunyangwe Puglia inzvimbo inopisa uye yakaoma nzvimbo, inonakidzwa nemhepo inotonhorera yemhepo mukati mehusiku. Izvi zvinobatsira kuunza chiyero mumazinga ekupisa kuitira kuti mazambiringa akwanise kuibva zvawo uye zvakakwana. Mhuri inomirira kusvikira yave nguva yakakodzera isati iko kukohwa michero inodyarwa pano. Sezvo achingoita mashoma madiki chete, basa rose rekukohwa rinopera mukati memazuva matatu.
Waini dzakagadzirirwa pano dziine chiratidzo cheI Muri pamabhodhoro avo. Ini Muri, muItaly, zvinoreva madziro ayo akavakwa pamusoro peminda iyi yemizambiringa nekuda kwezvakatemerwa kudhara. Primitivo neNeggoramaro ndiwo maviri mairi edhijitari anoshandiswa eVigneti Del Salento waini.
Ipo paine wiring mashoma maini anogadzirwa mune iyi label, iwe uchangowana waini chena inogadzirwa pano. Iyo ndiyo I Muri Bianco Puglia ICP. Iyo yakagadzirwa kubva kuMalvasia Bianca, Chardonnay uye Verdeca varietals. Iyo waini tsvuku inorongedzwa zvinoenderana nenzvimbo dzavanogadzirwa. Puglia, Malvasia Nera Salento IGP, Salice Salentino PDO, nezvimwe mimwe matunhu umo iwo matsvuku mitsipa yePrimitivo, Nergroamaro neMalvasia Nera akura kuti agadzire waini idzi.
Iwe unogona kuvimba neFarnese Vini mhando yewaini kuti ikupe iwe inovhakisa yewaini-inonaka yezviitiko nguva dzose. Imari nekuda kwechikonzero ichochi kuti vakaonekwa semugadziri wewaini wakanakisa weItari kwemakore matatu - 2016, 2017 na2019.